Misss Silky Smooth Shampoo - Download Facebook Videos - GenFK.com
Misss Silky Smooth Shampoo
လှပတဲ့ဆံကေသာနဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိခြင်းကို Misss က တန်ဖိုးထားပါတယ်။
သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ မှာ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Misss ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာရှိတဲ့ ပျိုမေတွေကို ပျော့ပြောင်းနူးညံ့ပြီး သင်းပျံ့တဲ့ ဆံကေသာကို ရရှိဖို့အတွက် ကူညီလျက်ရှိပါတယ်။ ပိုမို နက်မှောင်တောက်ပတဲ့ ဆံကေသာအတွက် ကြိတ်မှန်ရွက်ရဲ့ အဆီအနှစ်တွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အနက်ရောင်၊ ဆံကေသာ ရှည်လျားပြီး ကျန်းမာတောက်ပြောင်စေဖို့အတွက် အပြာရောင်၊ Bio-Nutrient နဲ့ Bio-Multi Vitamins တို့ ပါဝင်တဲ့ အဝါရောင်၊ ခြောက်ကြေမွလွယ်တဲ့ ဆံသားအတွက် သံလွင်သီး အဆီအနှစ်တို့ပါဝင်တဲ့ အစိမ်းရောင် Misss Silky Smooth Shampoo တို့ကို အသုံးပြုပြီး လှပတဲ့ဆံကေသာနဲ့အတူ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုရှိစေမှာပါ။
ဒီ page လေးမှာ ကြော်ငြာတွေ၊ အယူလွဲမှားစေတဲ့ သတင်းတွေ၊ နိုင်ငံရေးမှတ်ချက်တွေ၊ မလိုလားအပ်တဲ့ စာသားတွေ၊ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ စကားတွေနဲ့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးခွဲခြားတဲ့ ပို့စ်တွေကို မတင်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပြီး တင်ခဲ့လျင်လည်း ပယ်ဖျက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
FB URL: https://www.facebook.com/misssmyanmar/
Vita B+ ပါဝင်တဲ့ Miss Silky Smooth Shampoo
Misss Content – Just One Wash
Misss Hairstyle Contest
Misss Shampoo TVC ကို TV Channel တွေမှာ ထုတ်လွှင့်တဲ့အခါ ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုများခဲ့ပြီး အထူးအားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက် အတိုင်းမသိ ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ကြော်ငြာတစ်ခုအဖြစ် ပရိသတ်ကိုချပြနိုင်အောင် … Misss Shampoo အဖွဲ့သားတွေဟာ ပြည်ပကိုထွက်ခွာပြီး သွားရောက်ဖန်တီးခဲ့ကြရပါတယ်။ ပြည်ပပညာရှင်တွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု၊ ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး Misss Shampoo TVC ကို ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ပမှာသွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့ပေမဲ့လည်း မြန်မာပရိသတ်တွေအတွက် မြန်မာအငွေ့အသက်ပါအောင် ဆက်တင်ပြင်ဆင်ပြီး ရိုက်ကူးခဲ့ကြတဲ့ Misss Shampoo အဖွဲ့သားတွေအနေနဲ့ ပင်ပန်းရကျိုး၊ ကြိုးစားရကျိုး နပ်ခဲ့လို့ ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Misss Shampoo TVC အတွက် Behind the scene မှာ အဖွဲ့သားတွေ ဘယ်လိုကြိုးစားဖန်တီးခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ပရိသတ်နဲ့အတူ မျှဝေခံစားလိုက်ရပါတယ် …။ Misss shampoo TV commercial was broadcasted throughout the varieties of channels and was caught in the eyes of our audiences. Receiving applauded attention by our backup fans, it is beyond words for our expression of gratitude. Thus we thank all our supporters for their generous support & benevolence. Our advertisement crew visited abroad to create the scenes in order to display an internationally standardized ad. Together with the commercializing experts, our specialist team members put uparemarkable Misss Shampoo TV Commercial. Although filmed in overseas the essence of ethics on cultural did not lessen by all means for our Myanmar viewers. In conclusion, we are proud as well as delighted of the effort put in asaresult of setting together the locations that revives the spirit of Myanmar audience members. It was worth while the sweat & efforts focused & concentrated by our Misss Shampoo team contributors. Appreciations again towards our constant devotees out there!! So sit back, relax & enjoy as we share & guide you through the gang’s typical, labored hard works made behind the scenes of Misss Shampoo TV Commercial.
Misss Shampoo TVC